फागुन १० देखि तुलसीपुरमा प्रदेश एक्स्पो हुने :: Setopati
फागुन १० देखि तुलसीपुरमा प्रदेश एक्स्पो हुने
नारायण खड्का दाङ, माघ ३
प्रदेश एक्स्पोका सम्वन्धमा छलफल गर्न बसेको सरोकारवालाको छलफलमा सहभागीहरु।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ स्थित बेलझुण्डी रंगशालामा फागुन १० देखि १२ गतेसम्म प्रदेश एक्स्पो हुने भएको छ।
सरकारले प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा दाङमा एक्स्पो गर्न लागेको हो। २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सरकार स्थापना भएको थियो।
प्रदेश एक्स्पोका लागि झन्डै ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ।
त्यसैको तयारी स्वरुप जिल्लाका सरोकारवालासँग शुक्रबार छलफल भएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रशाद केसीले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका गतिविधि र संभावनाका बारेमा बृहत बहस तथा छलफल केन्द्रित गर्न एक्स्पो आयोजना गरिएको बताए।
प्रदेश स्थापनाको मध्यावधि समय भएकाले प्रदेशले निर्माण गरेका कानुन र गरेका कामको बारेमा प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले प्रदेश एक्स्पो गर्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे।
तीन दिनसम्म चल्ने उक्त प्रर्दशनीमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सबै १ सय ९ वटै स्थानीय तहको सहभागिता हुने कानुन मन्त्री केसीले जानकारी दिए।
त्यसमा प्रदेश भरका स्थानीय तहका संभावना, गरेका काम र चुनौतिका बारेमा छलफल हुनेछ । ‘प्रदेश भर प्राकृतिक संभावना के छन्? कहाँ हिरा खानी छ? कहाँ के कुराको संभावना छ? त्यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न एक्स्पो गर्न लागिएको हो,’ कानुन मन्त्री केसीले भने।
एक्स्पो उद्घाटन कार्यक्रममा झन्डै ५० हजारको सहभागी हुने, २ सय झाँकी जुलुस आउने अनुमान छ। एक हजार बढी गाडी पार्किङको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। स्टल निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । साथै एक्स्पो सफल तुल्याउन मुल आयोजक समिति, विभिन्न उपसमितिहरु पनि गठन गरिएको छ।
उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले गर्ने भएका छन्।
शुक्रबारदेखि नासा इन्टरनेसनल स्पेस एप्स च्यालेन्ज २०२०
गोदावरी नगरपालिकाका ४ पसलमा आगलागी
उपरथीमा बढुवा भएका श्रेष्ठलाई दर्ज्यानी चिन्ह
बझाङमा २५ किलो चरेससहित २ जना पक्राउ